Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment कस्तो अचम्म ! डाक्टरभन्दा पहिले कुकुरले पत्ता लाउने गर्छ मलेरिया रोग ! - Pnpkhabar.com
पिएनपिखबर, भक्तपुर : व्रिटेन र गाम्बियाको वैज्ञानिकअनुसार पहिलोपटक उनीहरुले यस्तो एक खोज गरे जसमा कुकुरले मलेरिया जस्तो रोगलाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्न सक्छ पनि पत्ता लाग्यो। अहिले कुकुरले सक्रमित व्यक्तिको कपडा सुँघेर मरेरियालाई पत्ता लगाउनको लागि ट्रेन गरिएको छ।
खासमा ब्रिटेनको डरहम यूनिवर्सिटीले केहि कुकुरलाई मलेरिया डिटेक्ट गर्ने प्रक्षिक्षण दिइएको छ । जनावरको मद्दतबाट मलेरिया जस्ता रोगहरुको निवारण गर्ने आशा वैज्ञानिकहरुको छ। हालैमा यस अनुसन्धान आफ्नो शुरुवाती चरणमा छ तर विशेषज्ञको अनुसारयसको परिणामबाट रोग पत्ता लगाउने नयाँ तरिका पत्ता लागेको छ। अध्ययनमा बताईएको छ कि जब कुनै व्यक्तिलाई मलेरिया लागेको छ भने उसको शरीरको गन्ध थोरै अलग हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा कुकुरको मद्दतले व्यक्तिको शरीरमा भएको मलेरियाको पहिचान गर्न सकिन्छ।।
दुर्घंदित मोजा पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बियाको एक इलाकामा सबै वच्चाले पुरा रात लगाइएर सुत्यो। त्यस मोजालाई ब्रिटेन पठाइयो ।पठाईएको १७५ मोजामा ३० बच्चाको मोजामा परजीविहरुको संक्रमण पाईयो । दुर्गंधित मोजालाई इंग्ल्याण्डको मिल्टन कींज़ शहरमा रहेको मेडिकल डिटेक्शन डग्स च्यारिटीमा पठाइयो। कुकुरसँ सुघ्ने तागत हुने गर्छ। यहाँका कुकुर क्यान्सर जस्ता रोगलाई पहिचान गर्नेको लागि प्रशिक्षित छ।
अमरीका सोसायटी अफ ट्रोपिकल मेडिसिन एंड हाइजीनको वार्षिक सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको परिणाममा पत्ता लाग्यो कि कुकुरले पनि मलेरियाको पत्ता लगाउन सक्छ। यी कुकुरले १० मा ७ संक्रमित सैंपलोंमा मलेरिया भएको सही पहचान गर्यो।
लन्डन स्कूल अफ हाइजीन र ट्रोपिकल मेडिसिनबाट डाक्टर शेल्सी स्कॉयर्सले बताएकी कुकरमा सुन्घं सक्ने क्षमता प्राकृतिक हुन्छ। शेल्सीले भने,’कुकुर डायग्नोस्टिक टेस्टमा पनि निकै तेज काम गर्छन। किनभने टेस्टमा कम से कम २० मिनेटको समय लाग्ने गर्छ। त्यस्तै जाँच गर्नेको लागि प्रशिक्षित या अनुभवी मानिस र नयाँ उपकरणको आवश्यकता पर्दछ।